मंसीर २१, काठमाडौँ । चर्चित रियालिटि शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन २ मा राम लिम्बु विजयी भएका छन् । राजधानी काठमाडौंको चुच्चेपाटी स्थित ह्यात ग्राउण्डमा शनिवार भएको भव्य ग्राण्ड फिनालेमा लिम्बु दर्शकको भोटका आधारमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएर ‘द भ्वाइस’ को उपाधि जितेका हुन् । लिम्बु टिम प्रमोदको तर्फबाट थिए । अन्तराष्ट्रिय फ्रेनचाइज शो […]
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र – सम्मानित होस् मेरो देश
म मान अनि सम्मानको भोको त कहिल्यै नबनौ ! मेरा शब्द रोपियुन यस देशमा यसैको भोकी सँधै बनौ !! मेरो मात्र सम्मान बढोस् यस्तो स्वार्थी कहिले नचाहुँ ! बरु देशलाई त्याग र सम्मान गर्न हरपल म चाहुँ !! म स्वार्थी आफ्ना लागि मात्र कहिल्यै नबनौ ! बरु देशमा पिडा भोग्नेहरुका लागि केही गरौँ !! म […]
मंसीर ११, काठमाडौँ । डा. निर्मलमणि अधिकारीद्वारा लिखित ‘सञ्चार सिद्धान्तीकरण’ नामक पुस्तक बुधबार काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लोकार्पण भएको हो । सञ्चारयोग मिडिया प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पुस्तकको लोकार्पण आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका गुरुहरू प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी, पीयूष मिश्र र श्रीरामसिंह बस्नेतले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । यो लेखक अधिकारीको ४५ औँ पुस्तक हो । ४२ बर्षको उमेरमा लेखकले […]
प्यारो यस देशको शुभ ताज म फेरौँ ! विकास र समृद्धिले धरा यो सजाऔँ !! हिमाली आकार यो जगत भर देखिने ! पाहाड, मधेसमा सहज पथ नि खोलौँ !!१ म हिम्मत बढाऔ है सारा युवाहरुमा ! अधिकार दिलाऊँ देशका सेनाहरुमा !! अव देशमा कोही पार्टीमा नबाँधियौँ ! यो देश नै जोगाएर जतन यसको गरौँ !!२ […]
बेला र मौका राम्रो छ इतिहासमा अमर हुन ! यो देशको हराएको सीमा फिर्ता ल्याउन् !! असल सुझाव सल्लाह दिने मानिसको साथ लिई ! प्रतिपक्षी र साथीभाइ सारालाई साथमा साथ लिई !! लुकेको भुमि फिर्ता ल्याएर सिमाना जोगाऊँ ! यसै गरेर सबै नै मिली देश पनि बनाएर !! देशको मायाँ छातीमा राखी सबैले हेरौँ त […]
मुक्तक – गाउँमा साईला दाई, डिग्री पढेर गोठाला हुन्छ
मुक्तक-जीबन मगर गाउँमा साईला दाई, डिग्री पढेर गोठाला हुन्छ । यता राजधानी तिर वाईडबडीमा घोटाला हुन्छ ।। कानुनको के कुरा गर्नु, न्याय हराएको देशमा, बालुवाटार ब्याक्तिको नाममा फैसला हुन्छ ।।
एजेन्सी, फिलिपिन्सकी चर्चित मोडल तथा नायिका डाफ्ने जोय उमेरले ३२ वर्ष पुगे तापनि आफ्नो सुन्दरतामा विश्वभरका करोडौँ युवाहरूलाई लठ्ठ बनाएकी छिन् । उनले हालै ब्ल्याक बिकिनीमा हट एण्ड ग्याल्यमर तस्बिरहरू आफ्नो इन्स्टाग्राम र फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
एजेन्सी, अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले फिल्म ‘साहो’का लागि सात करोड पारि श्रमिक लिएको चर्चाले बलिउडमा तरंग उत्पन्न भएको छ । रिलिज हुनुअगावै यस फिल्ममा श्रद्धा कपुरले लिएको पारि श्रमिकबारेको समाचारले निकै चर्चा पाएको छ । फिल्म निर्माताहरूले भने यसलाई केवल अफवाह मात्रै भएको बताएका छन् । यसका निर्माताहरूले सुरुमा अभिनेत्री कैटरिना कैफलाई फिल्ममा खेल्न अफर गरेका […]
हिम्मतिला बहादुरी अन्वेषण र आविष्कारको, विज्ञान सम्मत देश बनाऊँ ! संसारसित पनि हाम्रा विकसित पाइलाको पदचाप हामी साथै नै मिलाऊँ !!१ जगतले सहयोग दिंदा पनि हामी मौन चुपचाप होला किन् ? देश त हाम्रो प्राण पो हो त नि यसलाई बचाउन पनि कन्जुस्याइँ किन ??२ बिलासिताको जीवन त्यागी कर्ममय जीवन बनाऊँ ! गान्धीवादी जीनव बनाएर […]
सुनको विहानी यहाँ कहिले उदाउला भनि पर्खेर बसेकी छु म ! देशमा समृद्धि कहिले आउला भनेर सोची रहेकी छु हरपल छु म !!१ विकासका गति कहिले चुलिएलान यो पनि पर्खि बसेकी छु म ! जीवनमा समृद्धि कहिले आउला यो पनि हेरिरहेकी छु म !!२ यो देश मेरो हिराको हार अनि सुनको गहना जस्तो पो हो […]
कविता – घुम्न सबै मेरो देश नेपालमैं आऊ
हो गगनचुम्बी महल त छैनन् मेरो देशमा तर शिखर झैँ असल मनहरुले भरिएको छ मेरो देश ! चिल्ला आठ र सोऱ्ह लेनका बाटा छैनन् मेरो देशमा तर अक्करका भिरमा जोगिएर हिँड्ने बलिया र बहादुर नेपालीहरु छन मेरो देशमा !! हो डाउन टाउन भन्ने गगनचुम्बी भवनको एरिया छैन मेरो देशमा तर आकाश झैँ विशाल हृदयले भरिएका […]
संविधान देशको मूल कानून हो । मुलुकको सम्पूर्ण शासन व्यवस्था संविधान र यस अन्तर्गत बनेको कानुन अनुसार सञ्चालन हुन्छ । नागरिकका मौलिक हक अधिकार र तिनको सुरक्षाको व्यवस्था संविधानले नै गर्छ । संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । विभिन्न चुनौती र अवरोधलाई पार गर्दै […]